Maraoka: Mandray Anjara Amin’ny Fihaonamben’ny Tanora Ilay Mpanoratra Ato Amin’ny GV · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Novambra 2017 5:42 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Português, Español, Français, English
Tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo, nisy ny fihaonambe natao tao Casablanca tamin'ny 2007 DABA (fr), fikambanana manana tanjona amin'ny famerenana indray ny fandraisana anjara ara-politika ao Maraoka amin'ny fifidianana solombavambahoaka taona 2007. Mamaly ny fanontaniana hoe “Inona ny 2007 DABA?” ny tranonkala ofisialy:
Araka ny lahatsoratra avy amin'ny Magharebia.com, miezaka ny “hampandroso ny vehivavy sy ny tanora ho liana indray amin'ny politika ary hampitombo ny taham-pifidianan'ny vondrona hatramin'ny 25%” ny 2007 DABA.
Tsara vintana aho afaka nanatrika ny fihaonambe, izay notontosaina niaraka tamin'ny sampana Maraoka Ivon-toeram-pirenena Demokratika. Notontosaina nandritra ny telo andro, ny tanjon'ny fampiofanana dia ny hifantoka amin'ny fanatsarana ny fahaiza-manaon'ireo tanora mpitarika hevitra eo amin'ny fahalalana momba ny asa fanaovan-gazetin'olo-tsotra, miaraka amin'ny fanamafisana an-tserasera mba hampitombo ny fifanakalozan-kevitra momba ny olana atrehan'ny tanora. Nasaina handray anjara fitenenana teo amin'ireo bilaogera sy mpitarika forum aho mba hiresaka ny fomba mahomby amin'ny fampiasana bilaogy mba hanintona ny saina manoloana ny olana, ary koa mba hisarika ireo bilaogy mihitsy. Anisan'ny nandray fitenenana ihany koa ilay bilaogera Maraokana malaza Rachid Jankari (fr).